महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन - क. शिशिर श्रेष्ठ::Left Review Online
विश्वका महान वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्स्टाइनको मस्तिष्कलाई उनको मृत्यु भएको ३० वर्ष पछिसम्म पनि सुरक्षित राखिएको थियो । उनको मृत्यु पश्चात उनको मस्तिष्कको अध्ययन गर्ने न्यूरो सर्जनले उनको मस्तिष्कमा सामान्य मानिसको भन्दा ७३ प्रतिशत ग्लियल कोषहरु अधिक रहेको तथ्य पत्ता लगाएका थिए ।
महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म सन् १८७९ मार्च १४ तारिखका दिन जर्मनीको प्रसिद्ध शहर “उल्म” मा भएको थियो । आइन्स्टाइनको पिताको नाम हरमान आइन्स्टाइन थियो भने आमाको नाम पाउलिन जुइस थियो । सन् १८८५ मा आइन्स्टाइन परिवार अष्ट्रियाको म्युनिखमा सरेको थियो । बालककालमा बुद्धु भनेर परिचित आइन्स्टाइनको वैज्ञानिक यात्रा र वैज्ञानिक क्षेत्रमा उनले गरेको उपलब्धिको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास हामीले यस लेखमा गरेका छौ ।
आइन्स्टाइन बालककालमा मन्द बुद्धिका मात्र होइन तीन वर्षसम्म त उनले बोल्न पनि सकेका थिएनन् । आइन्स्टाइनलाई ६ वर्षको उमेरमा विद्यालयमा भर्ना गरिएको थियो । उनलाई शिक्षकहरुले पनि मन्दबुद्धि भएको र मूर्ख आइन्स्टाइनको संज्ञा दिएका थिए ।त्यसकारण उनी निराश बन्न पुगे । तर उनले हिम्मत हारेनन् । आफ्नो कठिन परिश्रम र लगावका बाबजुद उनले स्कुले शिक्षा पार गरी छोडे र उनलाई प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा ज्युरिचको टेक्निकल कलेजमा भर्ना गरियो, त्यहीँबाट सन् १९०१ म स्नातक उपाधि हासिल गरेका थिए ।
आइन्स्टाइनको प्रेम र वैवाहिक जीवनमा नजर दौडाउने हो भने आइन्स्टाइन आफू प्राविधिक कलेजमा अध्ययनरत हुँदा खेरि नै आफुभन्दा करिव ३ वर्ष जेठी मलिभा मारिक नाम गरेकी केटीसँग प्रेम बन्धनमा बाँधिन पुगेको थिए । सन् १९०३ मा आइन्स्टाइन आफ्नो प्रेमिका मारिकसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन पुगे। वैवाहिक बन्धनमा बाँधिए पछि सन् १९०४ मा प्रथम पुत्र अहवर्ट र दोस्रो पुत्र एडवार्डको जन्म सन्१९०६ मा भयो । छोराहरुको जन्मबाट आइन्स्टाइन अत्यन्तै खुशी थिए । उनको यो खुशीमा कालो बादल मडारिन थाल्यो जब उनी आफ्नो श्रीमतीसँग विछोड हुन पुगे । आइन्स्टाइन अधिक समय आफ्नो काममा नै व्यस्त हुने भएकोले उनलाई श्रीमतीले स्वीकारी रहन सकिनन् र सन् १९०९ मा याी जोडी बीचको सम्बन्ध अन्त भयो अर्थात आइन्स्टाइन र मारिकले सम्बन्ध विच्छेद गरे । त्यसपछि आइन्स्टाइनले आफ्नै मामाको छोरी एलिनासँग दोस्रो विवाह गरेका थिए ।
सन् १९०१ मा स्नातक उपाधि हासिल गरेपछि आइन्स्टाइन स्वीजरल्याण्डको नागरिक बन्न पुगेका थिए । अध्ययनपछि रोजगारीको अवसरको खोजीमा भौतारिँदै हिँड्दा उनको एकजना हितैषी मित्रले उनलाई बर्न सहरको पेन्टेड अफिसमा प्राविधिक सहायकको नोकरी उपलब्ध गराइदिए । रोजगारी आइन्स्टाइन त्यसपछि भने वैज्ञानिक खोज र आविष्कारमा तल्लीन रहन थाले ।
उनले २६ वर्षको उमेरमा “सापेक्षतावादको सिद्धान्त” विषयक शोधपत्र प्रकाशित गर्न सफल भए । हालको प्रख्यात सुत्र (E=MC²) पनि त्यसै सिद्धान्तमा पर्दछ । सैद्धान्तिक रुपमा पिण्डलाई शक्तिमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आइन्स्टाइनले यसै शुत्रबाट प्रमाणित गरेका थिए । आइन्स्टाइनको “सापेक्षतावादको सिद्धान्त” ले विश्व्यापी प्रसंशा पाउन पुग्यो र आइन्स्टाइन विश्वचर्चित बन्न पुगे ।
उनले वैज्ञानिक क्षेत्रमा आफूलाई अझ बढी लिन बनाउदै लगे । उनैद्वारा प्रतिपादित फोटो इेलेक्ट्रिक प्रभाव सिद्धान्तका लागि १९२१ मा भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कारबाट आइन्स्टाइनलाई सम्मानित गरियो। आफ्नो वैज्ञानिक यात्रालाई निरन्तरता दिने क्रममा आफ्नो जीवनको अन्तिम समय तिर उनी एकीकृत क्षेत्र सिद्धान्त (युनाइटेड फिल्ड थ्योरी ) को अनुसन्धानमा निरन्तर लागि रहे ।
त्यस समयमा इजरायलको दोस्रो राष्ट्रपति बन्नका लागि आइन्स्टाइनलाई आएको प्रस्तावलाई पनि उनले स्वीकार गरेनन्। निरन्तर वैज्ञानिक क्षेत्रमा लागि रहने क्रममा यस सिद्धान्तलाई पूरा गर्न नपाउदै १९५५ को अप्रिल १८ तारिखका दिन अमेरिकाको न्यु जर्सी राज्यस्थित प्रिन्स्टनमा उनको निधन भयो ।
विश्वविख्यात महान् वैज्ञानिक आइन्स्टाइनको व्यक्तित्व निकै उच्च थियो, जुन उच्चताको पर्वत अरु कुनै पनि वैज्ञानिकहरुले अहिलेसम्म चढ्न सकेका छैनन । वैज्ञानिकहरुमा सन्त–ऋषिको जस्तो व्यक्तित्व भएका आइन्स्टाइन कट्टर शान्तिवादी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ शान्तिवादी मात्र होइन, प्रजातन्त्रवादी पनि हनुन्थ्यो । आमुल परिवर्तनको पक्षमा वकालत समेत गर्नुभयो । कहिले पनि हिम्मत नहार्ने महान् वैज्ञानिक शान्तिवादी, प्रजातन्त्रवादी र समाजवादी अल्वर्ट आइन्स्टाइनबाट हामी विश्वबासीहरुले पनि केहि सिक्ने कि ? अन्तमा वास्तवमा अल्वर्ट आइन्स्टाइन महान् हुनुहुन्छ । यस्ता महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन विश्व मानव जगतमा सदा–सर्वदा अमर रहिरहनु हुन्छ भन्दा दुईमत नहोला ।
पछिल्लाे - भारतले आफ्नो विरोधाभासपूर्ण चीन नीति त्याग्नुपर्छ
अघिल्लाे - नयाँ विश्वविद्यालय